Ny maha-zava-dehibe ny hazo hifoka | Fanavaozana maintso
Ny maha-zava-dehibe ny hazo horaisina
Adriana | | Sambory co2, Tontolo_iainana
ny áHAZO tena ilaina izy ireo mifoka CO2 ary mandoto ny rivotra iainantsika.
Ankehitriny ny fahafahan'ny besinimaro ala toy ny mpamokatra oksizenina ary ny ankamaroan'ny planeta dia ala na simba ala, ala sy ny tontolo iainana miaraka amin'ny hazo sy zavamaniry marobe.
Ho an'ny fiarahamonintsika dia mora be sy haingana ny famoahana vola be CO2 Sahirana anefa ny hazo sy ny tontolo iainana mitroka ny gazy maro be.
Ny hazo antonony manana habe tsara dia afaka manadio rivotra 20 ka hatramin'ny 45 kg ao anatin'ny 1 taona arakaraka ny karazany.
Ny ala hektara tsirairay dia mety misy hazo 1000 eo ho eo, saingy tsy maintsy raisina izany fa ny hazo dia misimisy kokoa CO2 rehefa maniry izy ireo rehefa tonga amin'ny olon-dehibe ny fahaizany dia mihena kely.
Ny olona tsirairay dia mamoaka CO3,9 manodidina ny 2 taonina isan-taona, noho izany dia mila ala mihoatra ny 9000 tapitrisa hektara vao afaka misambotra izany habetsahan'ny CO2 izany.
Saingy ny mifanohitra amin'izany no mitranga hatramin'ny hektara an-tapitrisany ala mijoro eto amin'ny planeta ka tena manakorontana ny fifandanjan'ny tontolo iainana. Ratsy ny fifandanjana satria betsaka ny CO2 avoaka ary kely ny CO2 voatroka.
Zava-dehibe tokoa ny fitehirizana ala sy ala mikitroka satria ny setrin'ny hazo sy ny hazo madinika dia miara-miasa tsara kokoa noho ny tsirairay fotsiny.
La fandripahana ala Tsy maintsy mijanona ianao ary manomboka mandamina ala miaraka amin'ireo karazana zanatany any amin'ireo toerana nanapahana ny ala. Saingy zava-dehibe ihany koa ny fampihenana ny dian-tongan'ny karbonintsika manokana.
Hatramin'izao, ny hazo no fomba mahomby indrindra handraisana ny loto, tsy misy teknika namboarina hanoloana an'io fahafaha-manao io, ka tokony hikarakara azy ireo isika.
Ny ratsy kokoa dia ny rivotra fa miaina ambany kokoa isika dia ny kalitaon'ny fiainana hananantsika ary hisy fiantraikany bebe kokoa amin'ny fahasalaman'ny olombelona, ​​tsy tokony hadinontsika io lafiny io.
SOURCE: fizahan-tany maharitra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Tontolo_iainana » Sambory co2 » Ny maha-zava-dehibe ny hazo horaisina
Faritra entona na mandeha herinaratra
Kiraro miahy ny tontolo iainana